Ngabe Ibhizinisi lakho liyazi ngalezi Metrics Eziyinhloko ezine? | Martech Zone
Ngabe Ibhizinisi lakho liyazi ngalezi Metrics Eziyinhloko ezine?
ULwesine, May 24, 2007 NgoMgqibelo, Agasti 4, 2007 Douglas Karr
Ngihlangane nomholi wendawo omangalisayo kungekudala. Uthando lwakhe ngomkhakha wakhe kanye nethuba elilethayo kwakuthathelana. Sikhulume ngezinselelo zomkhakha wezinsizakalo lapho inkampani yakhe yenza khona ukugqama.
Kuyimboni enzima. Izabelomali ziqinile futhi umsebenzi kwesinye isikhathi ungazizwa ungenakunqotshwa. Ngenkathi sixoxa ngezinselelo nezixazululo, ngezwa ukuthi kweza kumasu amane abalulekile.
Ngokuya ngebhizinisi lakho, amamethrikhi ahlobene nalawa masu azoshintsha. Kufanele ube namamethrikhi ahlotshaniswa nenye, noma kunjalo. Awukwazi ukwenza ngcono lokho ongeke ukukala!
Ukwaneliseka kuyinto ebhalisa kabili enkampanini yakho. Cishe sonke siyizwile i-'whew 'ngemuva kokuthi ikhasimende elingenelisekile liyeke kithi. Kepha esivame ukungakunaki iqiniso lokuthi babuye basho isigamu sabanye abantu ukuthi babengenelisekile kanjani. Ngakho-ke ... awulahlekelwanga yikhasimende nje kuphela, futhi ulahlekelwe ngamathuba angeziwe. Ungalokothi ukhohlwe ukuthi amakhasimende (nabasebenzi) abashiya phansi ngenxa yokuthi abanelisekile batshela abanye abantu!
Njengoba inkampani ebasebenzelayo ingalaleli, bazoya batshele wonke umuntu abaziyo. Ukumaketha ngezwi ngomlomo akuyona into ekhulunyelwa ngokwanele, kepha kungaba nomthelela omkhulu ebhizinisini - elihle nelibi. Amathuluzi afana ne-Intanethi akhulisa ukunganeliseki.
Qiniseka ukuthi uhlola izinga lokushisa lamakhasimende akho nokuthi anelisekile (ngaphezu koku). I-imeyili elula, ucingo, ucwaningo, njll kungenza umehluko wentaba. Uma bengenalo ithuba lokukhononda kuwe - bazokhononda komunye umuntu!
Amakhasimende anelisekile achitha imali ethe xaxa futhi akutholela amakhasimende amaningi.
Ukugcinwa kuyikhono lenkampani yakho lokugcina amakhasimende ethenga umkhiqizo noma insiza yakho.
Okwewebhusayithi, ukugcinwa kuyiphesenti lezivakashi eziyingqayizivele ezibuyayo. Ephephandabeni, ukugcinwa kuyiphesenti lemindeni evuselela ukubhalisa kwayo. Okomkhiqizo, ukugcinwa yiphesenti labathengi abathenga umkhiqizo wakho futhi ngemuva kwesikhathi sokuqala.
Ukutholwa isu lokuheha amakhasimende amasha noma iziteshi ezintsha zokusabalalisa ukuthengisa umkhiqizo wakho. Ukukhangisa, ukumaketha, ukuthunyelwa kanye ne-Word of Mouth konke kungamaqhinga angaphansi okufanele ngabe uwasebenzisa, ukulinganisa, nokuvuza.
Ungakhohlwa… ukuzuza amakhasimende amasha kubiza kakhulu kunokugcina lawo akhona. Ukuthola ikhasimende elisha elizomiselela elishiyile akukhulisi ibhizinisi lakho! Iyibuyisela emuva kuphela. Uyazi ukuthi kubiza malini ukuthola ikhasimende elisha?
Inzuzo, yiqiniso, ukuthi yimalini esele ngemuva kwazo zonke izindleko zakho. Uma ungenanzuzo, ngeke ube sebhizinisini isikhathi eside kakhulu. Umkhawulo wenzuzo ukuthi isilinganiso senzuzo sikhulu kangakanani… abantu abaningi bakunaka kakhulu lokhu kodwa kwesinye isikhathi kube yiphutha. I-Wal-mart, ngokwesibonelo, inenzuzo ephansi kakhulu kepha ingenye yezinkampani ezinenzuzo enkulu (ngosayizi) ezweni.
Okuhlukile kukho konke lokhu, nguHulumeni.
Esikalini seGeek, Linganisa Lokhu!
Ukuhlelwa Kwemicimbi yaseCarolina
May 24, 2007 ku-9: 08 PM
Okuthunyelwe okumangalisayo! Uthandile umbono wakho, ikakhulukazi kumakhasimende. Ngiyabonga.
May 25, 2007 ku-2: 05 PM
Ukuphela kwento ebeka isitolo, isitolo, inkampani noma inhlangano ezansi nomgwaqo inkonzo yethu. Ngokudabukisayo, izinkampani eziningi, ziyehluleka ngisho nokufeza okulindelwe, ingasaphathwa eyeqile. Okuthunyelwe okuhle futhi kufanele kube yisikhumbuzo njalo kunoma iyiphi inkampani ekhathalela insizakalo.
May 25, 2007 ku-5: 12 PM
Okuthunyelwe okuhle bekuzama ukukulondolozela okumnandi… kepha kuzobhalwa khona ... !! Ukuqaphela okuhle!
May 28, 2007 ku-11: 44 AM
LOL! Ngiyasithanda isilinganiso sikahulumeni ekugcineni kwalokhu okuthunyelwe! Kuliqiniso impela. Akukhathalekile ukuthi yiliphi iqembu eliqhuba lo mbukiso, abantu abanelisekile ngeCongress, abanelisekile ngoMongameli, futhi abaningi ngisho nohulumeni basekhaya nabasekhaya.
Futhi uyazi yini ??? Uhulumeni unakekela cishe izinyanga eziyisithupha esikhathini ngasinye sabamele - Ngesikhathi sokukhethwa kabusha!